FEPETRA NAVOAKAN’NY ACM: Hentitra ny fanarahamaso ireo “Evasan” – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 11:56
Tsy maintsy hajaina ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra.
Accueil/Politika/FEPETRA NAVOAKAN’NY ACM: Hentitra ny fanarahamaso ireo “Evasan”
Anisan’ny sehatra hanararaotan’ny olona sasany hanaovana fanondranana an-tsokosoko sy tsy fanarahan-dalàna maro ny fitondrana marary miondrana any ivelany na ny (Evasan). Taorian’ny fanambaran’ny Filoham-pirenena, ny sabotsy teo, noho izany, dia namoaka lamina vaovao ny ACM, indrindra mahakasika ny Evasan.
Lucien R. 8 avril 2021
Ny sidina manao “Evacuation Sanitaire” na ny Evasan dia tsy voarara, araka ny fanambarana navoakan’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM), afak’omaly. Kanefa, tsy maintsy mahazo ny fahazoan-dalàna mialoha, avy amin’ireo tomponandraikitra mahefa izany. Ireo rafitra rehetra misahana ny fanarahamaso dia tokony hanatrika ny fiaingan’ny Evasan avokoa, indrindra ny misahana ny fanarahamaso ara-toekarena, ny misahana ny fanarahamaso sy fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, ary ny rafitra misahana ny fanarahamaso sy ny fiambenana ary ny filaminana amin’ny ankapobeny. Ankoatra izay, misy ireo antontan-taratasy samihafa tsy maintsy fenoin’ireo rafitra ireo mialohan’ny fanomezana fahazoan-dalana ny sidina. Ary ny mpanamory sy ny ekipa rehetra ao anaty fiaramanidina dia tsy maintsy hatao filitiana PCR avokoa amin’ny fotoana hiverenana.
Mitohy miasa ireo sidina mpitondra entana
Tetsy ankilany, nitondra fanamafisana vitsivitsy mahakasika ireo fepetra efa nolazain’ny Filoha Andry Rajoelina ny teo anivon’ny ACM omaly. Isan’izany ny tsy mbola fisian’ny sidina manokana iraisampirenena mihitsy aloha hatreto. Eo koa ny mbola fikatonan’ny sidina ara-pizahantany mihazo an’I Nosy Be. Ny Sidina anatiny, mivoaka sy ny miditra an’I Sava, Boeny, Nosy Be, Atsinanana dia foana avokoa. Ho an’ireo sidina mampitohy toeran-kafa, tsy maintsy vita fitiliana 72ora mialoha ireo mpandeha. Mahakasika ireo sidina fampodiana an-tanindrazana kosa indray dia miankina amin’ny fahazoan-dalana avy amin’ireo tomponandraikitra mahefa. Nohamafisin’ny ACM fa mitohy miasa ireo sidina mpitondra entana, saingy tsy mahazo mivoaka ny fiaramanidina ireo mpanamory sy ny mpiasa rehetra miaraka amin’ny fiaramanidina. Mahakasika ireo sidina iraisampirenena rehetra kosa, dia eo Ivato irery ihany fidirana sy fivoahana amin’izany.
CENI: Mpikambana vaovao miisa 6 amin’ireo 9 hotendrena no efa fantatra
FIVORIAMBEN’NY FIRENENA MIKAMBANA : « Tokony ho foanana ny trosan’ireo firenena andalam-pandrosoana” hoy Andry Rajoelina
TRANOBEN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA 5: Nisitraka “Kits de visioconference” avy amin’ny Unesco
EPP AMBOHIBAO ANTEHIROKA: Napetraka ho sekoly sakaizan’ny fidiovana sy fanadiovana